Sidee Loo Abuuray Twittter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo abuuray Twittter?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 417
Twitter waa shabakadda ugu weyn ee microblogging ee hadda jirta. Tan iyo markii la abuuray 2006, waxay uruurisay in ka badan 380 milyan oo isticmaale ilaa maanta. Waqtigan xaadirka ah, shabakadani waxay gaareysaa in kabadan boqol wadan waxayna leedahay 40 af.
Waxay ku saleysan tahay nidaam daabacaad gaaban oo la yiraahdo Tweet. Halka ugu badnaan 280 xaraf lagu qoro oo aad la wadaagi karto sawirrada, fiidiyowyada, qoraalka, URL-yada, iyo GIF-yada. Sidoo kale, waxay ku shaqeysaa nidaamka raacsan waana la raacay.
Waa maxay himilada Twitter?
Sida laga soo xigtay isla shirkadda, ujeedkeedu ugu weyn waa Sii qof walba awoodaha uu ku abuuri karo isla markaana kula wadaagi karo fikradaha iyo macluumaadka isla markaaba caqabado la'aan. Markaa waxay si joogto ah u qaabeysay oo ay u horumarisay isku xirkeeda si ay u siiso dadka isticmaala khibrad aan lahayn caqabado isgaarsiineed.
Wuxuu qaaday talaabooyinkiisii ​​ugu horeeyay ee Jack Dorsey, Noah Glass Biz Stone iyo Evan Williams gudaha San Francisco, California, Mareykanka, gudaha shirkadda Odeo. Markii hore, microblogging waxaa isticmaalay shaqaalaha shirkadda. Abuureyaashii asalka ahaa waxay ahaayeen Evan WIlliams iyo Biz Stone oo ay iskaashadeen kuwa kale.
Waxay bilaabatay inay howl gasho 15kii Julaay, 2006. Tweet-kii ugu horreeyay waxaa abuuray Dorsey 12:50 pm wuxuuna ku yiri "kaliya dejinta my twtrr", wax la mid ah "hagaajinta twtrrkeyga" Isbaanishka. Sannad ka dib, Twitter wuxuu helayay tixgelin, isagoo noqday mid caan ah, maaraynta ku guuleysiga "South by Southwest Web Award" qaybta baloogga.
Magacaabista shabakaddan waxay ahayd shaqo kacsan. Markii hore waxaa loogu magac daray Xaaladda, markii dambena waxaa loo beddelay Twtrr, iyadoo loo yaqaan "shimbir badeed". Xaqiiqdii, hal abuureyaasheeda waxay go'aansadeen inay hagaajiyaan magaca labaad iyagoo ku daray shaqallo qaar, waana sababta loogu magac daray Twitter. Sida laga soo xigtay iyaga, tarjumaadiisu waxay u dhigantaa "dildilaac gaaban oo macluumaad aan muhiim ahayn."
Shirkadda sii waday in ay koraan
Xilliga la abuuray Twitter-ka, hal-abuurayaasheeda waxay dhasheen Shirkad Cad oo ay iibsadeen Odeo. Laakiin muddo ka dib, 2007, Twitter wuxuu ka go'ay kii labaad si uu u noqdo shirkad madax-bannaan oo hoos timaadda madaxweynaha Jack Dorsey 2008.
Markay ahayd 2009 shirkaddu waxay kordhisay isku dhufashada shaqaalaheeda, helitaanka tixgelinta adduunka. Isla sannadkaas, adeegga xayeysiinta ee Twitter-ka ayaa soo galay oo dhammaadka sannadkan, wuxuu ku qabtay howlo dhowr luqadood ah; Isbaanish, Faransiis, Talyaani iyo Jarmal.
Sannad ka dib, shirkaddu waxay abuureysaa "Dhiirrigelinta Tweets" oo ah waddo cusub oo adeegga xayeysiinta ah. Goor dambe tan waxaa loo beddelayaa "xayeysiinta Twitter", ka dibna abuuro "Falanqaynta Twitter", iyada oo ujeedadu tahay in lagu cabbiro waxqabadka xisaabaadka isticmaalaha koontooyinka ujeeddooyin ganacsi.
Sannadkii 2015, Twitter wuxuu sameeyay "Periscope" si dadka isticmaala ay u tabin karaan si toos ah, sannadkaasna waxaa la sameeyay 200 milyan oo baahin ah. Sannadaha soo socda, shirkaddu waxay sii waday inay kororto, halkaasoo siyaasiyiinta, dawladaha, dadka caanka ah, cayaartoyda, kanaallada telefishanka ay ku leeyihiin koontooyin malaayiin taageerayaal ah
1 Waa maxay himilada Twitter?
2 Tallaabooyinka ugu horreeya
3 Magaca "Twitter."
4 Shirkadda sii waday in ay koraan
Sidee loo hagaajiyaa waxqabadka SEO ee Pinterest?
Sidee loo joojiyaa Youtube Premium?